दसैंमा स्वस्थ रहने उपायः जिब्रोलाई नियन्त्रण !
दसैं खुशी र उमंगको चाड । दसैंमा रमाइलो गर्ने, खाने पिउने हो । यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, उत्साहमा हामीले स्वास्थ्यमा त्यति ख्याल राख्दैनौं ।
विशेष रूपमा मासुको परिकार कोचेर खाइन्छ । मासुसँगै मदिरा, फलफूल हरियो सागपातको पनि प्रयोग गरिन्छ । अनि पर्व सकिएसँगै स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थाल्छ ।
पहिले पैसा हुँदैनथ्यो । मीठो परिकार खान दसैंतिहार नै आउनुपर्थ्याे । तर, अहिले समय बदलिएको छ । हातहातमा पैसा छ । त्यसैले अघिपछि पनि मीठो परिकार खान सकिन्छ । दसैं तिहार कुर्नु पर्दैन । त्यसैले खानपानमा ध्यान दिएर रमाइलोसँग दसैं मनाउनुपर्छ ।
खानपानमा यी कुरामा ध्यान दिइनुपर्छः
दसैंमा अधिकांशको भान्छामा मासुको परिकार पाक्छ । मसला कम हालेको मासु खानुपर्छ । मासुमा चिल्लो धेरै हुने भएकाले थोरै मात्रामा खानुपर्छ ।
मासुसँगै हरियो तरकारी खानुपर्छ, जसले शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । मासुलाई एकैपटक पकाएर फ्रिजमा राखेर निकाल्दै तताउँदै खानु हुँदैन । यसरी खाँदा पोषण पनि हुँदैन ।
नपकाएको मासु फ्रिजमा राख्ने अनि आवश्यक मात्रामा पकाएर खानुपर्छ । पकाएको बासी मासुको प्रयोग गर्नु हुँदैन । पेट ढुस्स भयो भने छाक छोड्नुपर्छ । कोचेर मासु खानु हुँदैन ।
दिनको तीन पटक मासु, तीन पटक मदिरा, जंक फूड खानु हुँदैन । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, युरिक एसिडजस्ता रोग लाग्छ । मासु र मदिरा एकै पटक सेवन नगर्ने । थोरै मदिरा सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने यो सत्य होइन । यो विष नै हो । यसले कलेजो बिगार्छ ।
मोटोपन भएकाले कम मात्रामा मासु खानुपर्छ । मोटोपन बढ्यो भने झन् रोग बढ्दै जान्छ । पातलो शरीर भएकाले अपच हुनेगरी खानु हुँदैन । त्यसैले सावधानी अपनाएर खानुपर्छ ।
बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष ध्यान दिने
दसैंमा बालबालिकाले जंक फूड र कोल्ड ड्रिङ्क्सको धेरै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बुबाआमाले बालबालिकाको विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जंक फूडमा नुन धेरै मिसिएको हुन्छ ।
त्यस्तै, कोल्ड ड्रिङ्क्समा चिनी धेरै मिसिएको हुन्छ । यसले मुटु र मिर्गौलालाई असर गर्छ । बालबालिकामा पेट दुख्ने बान्ता आउने समस्या हुन्छ । त्यसैले अभिभावकले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
भेजिटेरियनले के खाने ?
बजारमा राम्रो देखेर मिठाइ खाने चलन छ । बजारमा एउटै तेलमा बारम्बार पकाएको परिकार हुन्छ । डल्ला र वनस्पतिको घिउको प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
यसले मुटुमा असर गर्छ । त्यसैले घरमै बनाएको हलुवा, सेल, खीर खानुपर्छ । त्यस्तै हरियो तरकारी, भटमास, चिजको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
रोगबाट जोगिन के गर्ने ?
बिहान आधा/एक घण्टा हिँड्ने
समग्रमा जिब्रोलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । सानो जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने पूरै शरीर स्वस्थ रहन्छ । यसले जीवनलाई खुशी र सुखी बनाउँछ ।
(जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरूणा उप्रेतीको सहयोगमा)
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १८, २०७६, ०६:४९:००
१६ देशमा भेटियो कोरोना भाइरस, चीनमा मर्नेकाे संख्या एक सय पुग्याे
केयू विशेष सभा : प्राध्यापक र कर्मचारी संघले पाऊला वैधानिकता ?
के हो ह्याकाथन ? समस्यालाई कसरी ह्याक गर्ने ?
बच्चाहरूलाई खेलाउँदै सिकाउने हो
१० हजार जरिमानाबारे यसो भन्छ ट्राफिक महाशाखा
सुर्खेतमा गोली चल्यो, ८ घाइते, कर्फ्युु लगाउने तयारी (अपडेट)
रेक्टरमा कांग्रेसले अयोग्य व्यक्तिको सिफारिस गरेपछि ...